Mila raharaha | NewsMada
Par Taratra sur 20/04/2017
Ny eo tsy vita, ny hafa mitomboka ihany… Mikasika ireo karazana « Raharaha » mafampana sy mahabe resaka amin’izao fotoana izao izany. Mipoaka be am-boalohany fa mitsefotra foana ny farany. Na ny zaza milalao aza, mahalala ny « Raharaha Claudine ». Vitsy kosa ny mahafantatra ny tena ho tohiny, fa dia miandry izay hapoakan’ny sasany sisa.
Hitarika “Rarahaha” maro mantsy, ary azo antoka fa hamoha “Raharaha” taloha izy ity. Samy mitaintaina na ny mpitondra izao na ny teo aloha. Tsy maintsy hisy ny “, raha maty aho, matesa rahavako…”
Samy mitady hirika ifamelezana ny mpifahavalo politika amin’izao fotoana izao. Ny andaniny, miezaka mafy miaro. Ny ankilany kosa, miezaka mafy mandetika. Fomba fiady ihany izany, indrindra fa efa nifandimby fitondrana ireo. Gaga mihitsy ny mpanara-baovao rehefa manopy maso ny gazety rehetra mpiseho isan’andro: ny vaovaon’iza ihany no inoana? Samy mivoaka andro iray izao, koa itsy mahita mainty nefa ity mahita fotsy?
Misy antony goavana, lazaina fa iankinan’ny firenena, fa indrindra koa ho an’ny paosin’izay voakasika izany ao ambadika ao. Havotsotra sa tsia ny volaben’ny mpamatsy vola? Ny mpiady fanjakana, manao izay tratry ny heriny mba hahafaty momoka izany. Ny tompoh-pahefana kosa, miraviravy tanana, tsy mahita izay horaisina.
Raharaha ity… Tsy misy te ho eo amin’ny toeran’ny mpanapaka raha sendra izany. Havela hilentika ny sambo niondranana sa hafoy ny volabe efa manangasanga? Kanefa, toa tsy mamela mahazo koa iretsy vondron’olona, fikambanana, antoko politika, efa niandry hirika hatramin’izay.
Ho an’ny olon-tsotra tsy mila aretim-po, ny raharahany isan’andro ihany no imasoany.